Cable yekubatanidza bhokisi (rimwe mukati uye rimwe kunze), China Cable yekubatanidza bhokisi (rimwe mukati uye rimwe kunze) Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Qingdao yakashandiswa photonic matekinoroji Co., Ltd
Cable yekubatanidza bhokisi (rimwe mukati uye rimwe kunze)
Iyo yemagetsi tambo yekubatanidza bhokisi inovimbisa kuvimbika uye kugadzikana kwechigadzirwa kuburikidza nehunyanzvi dhizaini, kugadzira uye kusarudzwa kwezvinhu, uye yakanakisa yekuisa chisimbiso tekinoroji. Inopa yakavimbika, yakasimba, uye inodzivirira dziviriro ye fiber yakanangana, inogumiswa kana kusiyanisa kubatana. Iyo inowanzo shandiswa yakatwasuka-kuburikidza nekubatanidza uye kusiyanisa kubatana kwekunze kwemaziso tambo kumusoro, pombi, kuviga kwakananga, nezvimwe, uye mabasa ekudzivirira kubatana. Chigadzirwa chine zvikamu zvina: casing yekunze, nhengo yemukati, chinhu chekuisa chisimbiso uye chekuchengetedza fiber.
1. Optical tambo yekubatanidza bhokisi izita rakakurumbira, iro zita resainzi rinodaidzirwa kuti cable tambo yekubatanidza bhokisi, inozivikanwawo seye optical cable yekubatanidza package, Optical cable connector package uye dhiramu. Iyo michina yekumanikidza kusimbisa yejoinhi system, inoenderera ichi dziviriro chishandiso icho chinopa oparesheni, yekuisa chisimbiso uye mechina simba simba kuenderera pakati pepedyo mekutarisa tambo. Inonyanya kushandiswa kutwasuka-kuburikidza uye kubatanidzwa kwebazi kwepamusoro, pombi, kuviga kwakananga uye dzimwe nzira dzekuisa dzinoshandiswa kune akasiyana tambo dzakajeka tambo.
2. Bhokisi remuviri rinotora kunze kwepurasitiki yakasimbiswa, yakasimba simba uye kurwisa kurora. Iyo yekupedzisira bhokisi inokodzera kubatana mune yekupedzisira muchina kamuri yeiyo yemahara Optical tambo. Chimiro chakakura, chisimbiso chakavimbika, uye kuvaka kuri nyore. Inoshandiswa zvakanyanya mukutaurirana, network masisitimu, CATV tambo TV, fiber optic tambo network masisitimu, uye zvimwe.
3. Inoshandiswa pakudzivirira kubatana uye kugadzira fiber pakati pematare maviri kana anopfuura. Iyo ndeimwe yemidziyo inowanzo shandiswa yemushandisi yekuwana mapoinzi. Iyo inonyanya kupedzisa kubatana pakati pekuparadzira tambo uye inopinda tambo, uye inogona kuve yakavakirwa paFTTX. Kuwana kunoda kumisikidzwa kwebhokisi kana yakapusa dhizaina.